fa amin’izao fotoana izao, dia somary takona ireny, ary toa nosasan’ny Barean’i Madagasikara ny lamba malotontsika. Tena hafa mihitsy ny fahatsapana ao anatin’ny Malagasy, fa hay izy tsy mitsanga-menatra, hay izy afaka mirehareha amin’ny ekipam-pireneny fa tsy ho mpitsiriritra ny an’ny hafa intsony, hay tena tsiriritin’izao tontolo izao ny fiaraha-mientany sy ny fanohanany ny ekipany na amin’ny mora na amin’ny sarotra,…. Somary somokatra tany hatramin’ny mpitondra, izay tsy atao mahagaga satria any rahateo no fon’ny vahoaka, ka mety misy kely ihany ny finiavana hamadika izany ho amin’ny tombotsoa politika. Na izany aza dia deraina sy amporisihina hitombo hatrany aza ny fanohanan’ny fanjakana ny ekipam-pirenena, izay adidiny rahateo. Nilaza ohatra ny Filoha, fa havaozina hatao mahazaka olona 50 000 hatramin'ny 60 000 ny kianjan'i Mahamasina. Hanafarana bozaka na "pelouse" toy ireny kianja manaram-penitra amin’ny CAN na ny « Mondial » ireny, ary ho anisan'ny kianja lehibe indrindra aty amin'ny ranomasim-be Indianina. Lojika raha mitsiry izany hevitra izany, kanefa ampahatsiahivina ihany koa efa maro izay fampanantenana izay, toy ny Tanàna Tanamasoandro, Tramway, Building, Toamasina ho tahaka an’i Miami, Ambatondrazaka ho toa an’i Paris, trano fonenana 50 000,… saingy na ady fototra aza aloha mbola tsy mandeha hatreto. Sao ho be famaritra fotsiny eo mantsy !